LA YAAB: TV Iiraani ah oo faafreeb ku sameeyay baajka kooxda AS Roma! (Sabab?) – Gool FM
(Tehran) 05 Abriil 2018 – Arrin ku saabsan baajka kooxda AS Roma ayaa aad looga hadal hayaa dalkaasi Iiraan, kaddib markii uu TV dalkaasi laga leeyahay uu faafreeb ku sameeyay qayb ka mid ah baajkaasi, ciyaartii xalay dhexmartay kooxaha Barca iyo Roma ee rubuc-dhamaadka Champions League.
Astaanta Roma ayaa waxay caan ku tahay mataanaha Romulus iyo Remus oo jaqaya naaska xayawaanka Yeeyda, iyadoo ay sheekada xariirada Roman-ku dhigeeyso in ay labadan mataano oo la tuuray ay yihiin kuwa aasaasay caasimadda qadiimiga ah ee Roma.
Yeelkeede, TV Iranian ah oo la yiraahdo Voice and Vision ayaa si uun khalad ugu arkay mataanahan jaqaya naaska yeeyda iyagoo kaddib muuqaalkii wax dul saaray.
Kaddib waxaa baraha bulshada aad u dhex xulay baajkii la faafreebay ee Roma.
RASMI: AC.Milan oo heshiis cusub ka saxiixday tababare Gennaro Gattuso